Ny sakana fiarovana amin'ny tselatra miaraka amin'ny famoahana farany ambony indrindra amin'ny 80KA dia mety amin'ny fiarovana ny tselatra ny famatsiana herinaratra lehibe amin'ny toerana manan-danja. Ity vokatra ity dia ampiasaina betsaka amin'ny rafi-pahefana toy ny tobin'ny serasera finday, birao / tobim-pifandraisana mikraoba, efitrano fitaovan'ny fifandraisan-davitra, orinasa indostrialy sy toeram-pitrandrahana, fiaramanidina sivily, fitantanam-bola, fiarovana, sns. , kabinetra fitsinjarana herinaratra, Fizarana herinaratra AC sy DC, vata fametahana, ary fitaovana manan-danja hafa izay mora voan'ny tselatra. LHSPD andian-dahatsoratra firongatry ny fiarovana fitaovana (avy eo antsoina hoe LHSPD) dia mety amin'ny AC 50/60HZ, laharana malefaka hatramin'ny 385v LT, TT, TN-C, TN-S, TN-CS sy ny hery hafa rafitra famatsiana, dia miaro ny ankolaka ary ny fiantraikan'ny jiro mivantana na ny famolavolana SPD malefaka amin'ny alàlan'ny fenitra GB18802.1 / IEC61643-1.
Ny firongatry ny rafitra famatsiana herinaratra dia avy amin'ny antony roa indrindra: ivelany (tselatra) sy anatiny (fanombohana, fijanonana ary tsy fahombiazan'ny fitaovana elektrika, sns.). Ny fisondrotana dia matetika miavaka amin'ny fotoana fohy (ny overvoltage ateraky ny tselatra dia matetika ao amin'ny microsegondra ary ny overvoltage ateraky ny fitaovana elektrika dia matetika ao amin'ny milisegondra), fa ny voltase sy ny courant eo noho eo dia tena lehibe, izay mety hiteraka fahavoazana amin'ny fitaovana elektrika sy tariby. , noho izany dia ilaina ny mpiaro ny fihoaram-pefy mba hiarovana azy ireo. Surge Protective Device (SPD) dia fitaovana elektronika manome fiarovana amin'ny fitaovana elektronika isan-karazany, fitaovana ary zotram-pifandraisana, ary ampiasaina indrindra hamerana ny onjam-peo mahery vaika sy ny fivoahana. Ny mpiaro ny fisondrotana dia matetika mifandray amin'ny fitaovana arovana, izay afaka manilika sy mametra ny voltase rehefa misy ny overvoltage. Misoroka ny rivodoza sy ny voltase be loatra amin'ny fitaovana manimba.
Rafitra sy fitsipika
LHSPD dia seranan-tsambo, fiarovana manafintohina, fametrahana ao anaty trano, fetra voafetra.
LHSPD mihazona disconnector ao anatiny, avy eo ny LHSPD fahapotehan'ny tsy fahombiazana noho ny fanafanana, ny disconnector dia afaka manala ho azy avy amin'ny herinaratra grid, ary mampiseho famantarana famantarana, rehefa LHSPD miasa tsara, hita maso varavarankely mampiseho maitso, lt mampiseho mena rehefa tapaka sy tapaka. 1P + N, 2P + N, 3P + N spd dia misy 1P, 2P, 3P SPD + NPE zero fiarovana module, mihatra amin'ny TN-S, TN-CS ary rafitra famatsiana herinaratra hafa
Apetaho amin'ny tsipika voaaro (fitaovana) ny LHSPD eo anoloana ary mifandray amin'ny tsipika famatsiana. Ny vokatra kilasy iray apetraka ao amin'ny tsipika fidirana an-trano dia mitazona boaty fanaparitahana amin'izao fotoana izao.B, vokatra kilasy C ny ankamaroany apetraka ao amin'ny boaty fizarana gorodona, vokatra kilasy D akaikin'ny fitaovana eo anoloana - faran'ny fitaovana izay kely kokoa ny firongatry ny ankehitriny, kely sisa tavela. Place
Ny orinasa dia mifikitra hatrany amin'ny fanavaozana ara-teknika, manatsara hatrany ny vokatra naoty, maka ny famoronana marika fitaovana eran-tany sy ny politikan'ny kalitaon'ny vokatra mahafa-po ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany; Mihaino ny feon'ny mpanjifa izahay ary manome vahaolana amin'ny olana; Valio haingana ny mpanjifa, ataovy azo antoka fa afa-po ny mpanjifa tsirairay ary mampanantena fa hanome serivisy kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifa.
Nominal famoahana ankehitriny Ao amin'ny 10KA
Imax 20KA ny fivoahana farany ambony indrindra
Ny haavon'ny fiarovan-tena ambony ≤ 1.6KV
Fisehoana: fisaka, voasary, fanontana pad
Ny haavon'ny fiarovana amin'ny voly Up ≤ 2.3KV
Famoahana farany ambony indrindra: 40, 60, 80, 100, 150KA......
275/320/385/440V~（tsy voatery ary azo zahana）
Imax amin'izao fotoana izao ny fivoahana ambony indrindra (8/20)
Fisehoana azo atao
Plane, arc feno, arc, 18 sakany, 27 sakany (tsy voatery, azo amboarina)
Fotsy, mena, voasary (tsy voatery, azo amboarina)
Mpiaro ny fiakaran'ny herinaratra, mety ho an'ny rafitra famatsiana herinaratra dimy tariby telo-dingana, fametrahana lalamby.
teo aloha: Mpiaro tselatra ho an'ny fiarovana sy ny fanaraha-maso video
Manaraka: Fitaovana fiarovana 18 Firafitra fiarovana
●Aorian'ny fametrahana, (tsy maintsy apetraka eo amin'ny toerany ny maody fiarovana tselatra 18mm) jereo raha mandeha tsara ny maody fiarovana ny tselatra.
●10350gs, karazana fantsona fivoahana, misy varavarankely: Mandritra ny fampiasana dia tokony hojerena sy hojerena tsy tapaka ny varavarankelin'ny fampisehoana diso. Rehefa mena ny varavarankelin'ny fampisehoany fahadisoana dia midika izany fa tsy nahomby ny maody fiarovana ny tselatra ary tokony hamboarina na hosoloina ara-potoana.
27 Sidall Structure Surge Fiarovana Fiarovana